Ọlọ ahịa gị n’ịntanetị ọ nwere բլոգ?
Okporo ọzọ: Nke mbụ, blog, dị ka magnet na ebe nrụọrụ weebụ gị. Oge ọ bụla ị biputere Օրագիր ọhụrụ, a na-adọta ndị ahịa azụ na saịtị gị iji gụọ ya. Կայք n’ebe ahụ, ọ bụ nanị obere ngwepụ na nzọụkwụ na peeji nke ngwaahịa gị. Ịdebe blọọgụ mgbe niile na-eme ka okporo ụzọ na-agbanye, nke bụ isi ihe na-eme ka ị gbanwee ahịa.
Njikọ njikọta: Nke abụọ, oge ọ bụla onye ahịa na – agụ blog gị, ha na – eche na ejikọrọ ha na akara gị. Ha na-amụtakwu banyere gị ma na-eto eto iji tụkwasị gị obi. Ọnụ ọgụgụ na-egosi na karịa 95% nke ndị ahịa adịghị njikere ịzụta n’aka gị ozugbo. Ya mere, zụlite ha nke ọma ruo mgbe ha dị njikere ịzụta.
Ha na-eduga: Oge ọ bụla mmadụ na-ekere òkè gị, ebe nrụọrụ weebụ gị na-abata ndị ahịa ọhụrụ. Ọ na-emepụta ọhụrụ na ị nwere ike iji nwayọọ nwayọọ gbanwee ka ị na-akwụ ndị ahịa ụgwọ. Bụ ahịa efu na mfe.
Google- ի տվյալների որոնում. Google- ը գտնում է, որ դուք պետք է ունենաք na-emelite mgbe niile- ը: Ha na-ahụkwa blọọgụ bara uru dị omimi. Առցանց na-echekwa na biputere blọọgụ mgbe niile a na – ahọrọ elu karịa ndị na – enweghị. Otu blog na-enyekwa gị ohere iji ọtụtụ isiokwu ndị na-enyere Google aka ịghọta na categorize azụmahịa gị. Կայք na ịde blọgụ, ị ga – enwekwa ike ịnye njikọta na ebe nrụọrụ weebụ gị, nke Google na – eji tụọ ikike gị. Mgbe ụlọ ahịa gị n’ịntanetị dị elu, ị ga-enwetakwu okporo ụzọ, na ọtụtụ ahịa.
Ya mere, anyi niile kwetara, ọde blọgụ dị oke mma maka azụmahịa azụmahịa gị. Nanị akụkụ dị egwu bụ ịchọpụta ihe ị ga-ede banyere բլոգ: Nnukwu atụmatụ nwere ike inyere gị aka, m kwenyere na ya ike nke ịhazi ọdịnaya gị. Enweela m ihe ole na ole iji malite.
3 3. Նկուզին
4 4. Նկվուպտա
7 7. Ստացեք ստեղծագործական!
Օրագիր bn nnukwu ikpo okwu iji gwa gị akụkọ. Ịhapụ ndị ahịa n’ime wa gị na-ewuli ntụkwasị obi. Ọ na-eme ka mmekọrịta dị mma, na-enye aka mee ka mmekọrịta dị n’etiti gị na ndị ahịa gị.
Jiri blog gị kọwaara ihe mere i ji malite ụlọ ụrụ, na ihe mere ngwaahịa ndị ahụ ji dị gị ezigbo mkpa. Buru uzo, n’eziokwu, na imeghe, ndị ahịa gị ga-atụkwasịkwu gị obi.
Nwekwara ike iji blog ka ndị ahịa mara ihe na-aga n’azụ Mpaghara. Gwa ha ihe ị na-aga, ma kọọ ha na mgbasa ozi na-abịa. N’okpuru ebe a, lelee Helm (ụlọ akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ anụ) na-eme ka ndị na-agụ ya ruo oge ha na ntanetị.
Glo akkọ gị na բլոգ
Dị ka ihe atụ, igwe na-eji nwayọọ nwayọọ, bụ ụlọ ọrụ nke na-emepụta nche na ighikota (ọ dị otu aka): Ha na-eji բլոգ ha kọwaa otú ha si mee ha dị iche. Ọ na-enye ndị ahịa aka ịghọtakwu ụdị azụmahịa gị, na-eme ka ha nwee ike ịzụta ngwaahịa gị.
Nyere ndị mmadụ aka ghọta ihe gbasara ngwaahịa gị.
Օրագիր bụ ebe dị mma igosi gị achkachamara. Ọ bụrụ na ị nwere ike inye amamihe ma ọ bụ kụziere onye ahịa otú a ga-esi eme ihe, ozugbo ị malitere mmekọrịta. Ị gosipụtara na ị bụ ọkachamara n’ọhịa gị, nke na-agba ndị ahịa ume ịtụkwasị gị obi.
Dị ka ihe atụ, Maybelline na-ere ngwaahịa etemeete. Ha blog juputara na ndụmọdụ bara uru ma na-esi na ya. Rịba ama otú ha si eji blọọgụ nkuzi ndị a iji gosi ngwaahịa հա: Ugboro abụọ na-egbuke egbuke!
Օրագիր gị bụ ụzọ dị mfe ma dị mfe iji kpọsaa ngwaahịa ọhụrụ ma ọ bụ mee ememe dị ịrịba ama. Ihe omuma a di n ‘ozo na egosiputa ulo oru sneaker’ Ejuputa ahihia ‘n’ikwu ọkwa ohuru. Bụ ụzọ dị mfe iji gosi ndị ahịa ị na-etolite, na-echekwa ha.
Nwere ike iji blog gị na ụlọ ọrụ gị. Ịkwusa nnukwu ozi ọma banyere ụlọ ọrụ gị na-egosi na ị bụ nke oge na-egosi na ị nọ n’ụwa. Bụ ụzọ dị mfe iji gosi ọkachamara gị, ma na-eburu akụkọ ọkụ ọkụ n’obi.
Akụkọ akụkọ dịka nke a na-achụpụ ọtụtụ okporo ọzọ, karịsịa site na ndị na – ege ntị nke ọma – ndị na – eso ụlọ ọrụ ahụ nke ọma.
Dịka ọmụmaatụ, dị ka ihe atụ, ere ahịa ngwá ọrụ sọọfụ. Ha na-enweghi ike ịkwọ ụda okporo ụzọ site na ịkọ akụkọ banyere asọmpi asọmpi na akụkọ ụlọ ụrụ:
Anyị na-amalite ịhụ blọọgụ blọọgụ na isiokwu. Նթակ-ա? Maka otu Google nwere gosipụtara mmasị maka ogologo, na-agụ ihe omimi, ma mee ka ha dị elu. Ma ọ bụkwa n’ihi na ọ na-eme ka ndị mmadụ na saịtị gị dị ogologo ma na-enyekwu ozi. Otu ụzọ isi mee nke ahụ bụ ogologo oge ‘iche echiche’ ma ọ bụ ikwu okwu na ụlọ rụ ahụ.
Ka anyị kwuo na ị nwere ụlọ ahịa ejiji ahịa, dịka ọmụmaatụ. Nwere ike iji blog gị ụza ajụjụ banyere ọnọdụ ndị na-adịbeghị anya. Nwere ike ịkatọ ụlọ ọrụ ejiji ma ọ bụ kwadoo ụfọdụ n’ime nsogbu ahụ (ihe ọ bụla si n’ụdị iji aji): Ndị a na-eche na ị na-ejikarị bọmbụ karịa gị.
7. Ստացեք ստեղծագործական!
Ihe kacha mma banyere ịde blọgụ bụ enweghị iwu! Nwee echiche na iche n’èzí igbe. Ị nwere ike ịde blog banyere ihe ọ bụla nwere njikọ ụfọdụ na ngwaahịa gị na ụlụ ọrọ gị. Ọ bụrụ na ị na-ere nri արհեստավոր, բլոգ banyere ntụziaka ị hụrụ n’anya. Echela na enwere gị ike iji ụfọdụ usoro ma ọ bụ ntụziaka. Jiri blog gị iji gosi onwe gị.
Օրագիր banyere njikọ nke ngwaahịa gị na ụdị ihe niile
Ụlọ ọrụ ọ bụla nwere kalenda pụrụ iche nke ihe omume. Ọlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ nwere TechCrunch. Lọ ọrụ ndị na-atọ ọchị nwere Comic-Con. Lọ rụ egwú nwere Coachella na SXSW. Lọ rụ egwuregwu ndị dị egwu nwere X- խաղեր: Bụrụ na ị na-ere ngwaahịa na ọrụ ndị a, gbalịa ịga ihe ndị a. Dee n’azụ ihe njirimara nke na-etinye ndị ahịa gị. Ọ na-egosi ha na ị nọ n’obi ụlọ ọrụ gị. Ọzọ, ọ na-eme maka kediegwu ọdịnaya!
Lelee otu otu lọ ahịa ejiji eji Paris Fashion Week tinye ihe ọhụrụ n’ime blog.
Kpuchie ime omume ndụ